विद्यालयलाई कसरी सहभागी गराउने? | नुवागी
नेपालको राष्ट्रिय कार्यक्रम ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ शुरु भइसकेको छ । तर अधिकांश विद्यालयलाई भ्रमण वर्षले छोएको देखिँदैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि भ्रमण वर्ष लागेको देखिँदैन । हामी कुनै पनि कार्यक्रम गर्दै छौँ भने त्यसको महिना दिन अगाडि नै सम्पूर्ण काम तयार गरिसकेको हुनेमा भ्रमण वर्ष शुरु भएको महिनादिन हुन लाग्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय र अधिकांश विद्यालयको भ्रमण वर्षको योजना बनेको छैन ।
११ महिना अझै छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय संगठनका प्रतिनिधि र शिक्षा विद्हरूलाई सहभागी गराएर राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा रहेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रको के भूमिका हुन सक्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ । र बनेको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तह या शिक्षा शाखाले पनि यो काममा अघि बढ्नुपर्छ । सरकार या स्थानीय निकायले विद्यार्थीको सहभागितामा कार्यक्रम गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा भएका पर्यटकीय गन्तव्यमा कसरी पर्यटक भित्र्याउनेदेखि लिएर विद्यार्थी र शिक्षकलाई यसमा कसरी सहभागी गराउने भनेर सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको पर्यटकीय क्षेत्र छुट्याएर विद्यालयका प्रिन्सिपल, विद्यार्थी र अभिभावकलाई भेला गरेर कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ ।
यो वर्षभरि शिक्षासँग पर्यटन जोडेर गर्न सकिने कामहरू के के हुन् सक्छ भनेर सरकारले छलफल गर्नुपर्छ । पर्यटनका कुराहरू पाठ्यक्रममा आइरहेका छन् । तर भ्रमण वर्षको विशेषता के? अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष पर्यटनको क्षेत्रमा शिक्षालाई जोडेर के विशेष कार्यक्रम ल्याउने भनेर एक ठाउँमा बसेर सोचेर संयुक्त कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।
सरकारले विद्यालयलाई भ्रमण वर्षमा सहभागी गराइ यसमा विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षकको भूमिकाका बारेमा बताउनुपर्ने विद्यालयका प्रिन्सिपलहरू बताउँछन् । एकै पटक व्यापक रूपमा भ्रमण वर्षका बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रचार गर्न सहज र सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेकै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । विद्यार्थीलाई भ्रमण वर्षका बारेमा बताएर त्यसलाई अभिभावक र समाजसम्म सरकारले कुनै पनि निकायलेभन्दा छिटो पुर्याउन सकिन्छ । भ्रमण वर्षका बारेमा विद्यालयले नै प्रष्ट रूपमा बुझिनसकेको अवस्थामा शुरुमा सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयलाई यसका बारेमा बुझाउनु आवश्यक छ ।
सरकारले विद्यालय क्षेत्रभित्र विद्यार्थीलाई सरसफाई गराउने र फोहर फ्याक्न नहुने जनचेतना जगाएर पनि नेपाल भ्रमण वर्षमा नेपाललाई सफा राख्न सक्छ । विद्यार्थीलाई विद्यालयबाटै जथाभावी फोहर गर्नुहुन्न भन्ने जनचेतना जगाउन सकेमात्र पनि सो विद्यार्थीले जथाभावी फोहर फ्याक्दैन र आफ्ना परिवारलाई पनि फोहर फ्याक्न दिँदैन । विद्यालयले मात्र नभइस्थानीय सरकारले फोहोेर फाल्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने नियम बनाएर फोहर कम गर्न सकिन्छ ।
ललितपुरको कल्याण इङ्लिश सेकेण्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल श्याम कार्की सरकारले विद्यार्थीका लागि उपयोगी भ्रमण क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । प्याब्सकका अध्यक्ष गेहेन्द्र लामा सरकारले विद्यालयको भ्रमणका समयमा भिजिट नेपालको लोगो सहितको टिसर्ट तथा क्यापको प्रयोग गर्नको लागि भनिदिए अझ यसको बारेमा बढी प्रचारप्रसार हुनसक्ने सुझाव दिन्छन् । ‘शैक्षिक संस्थामा आबद्ध र सबै जनतालाई सरकारले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल र साइटहरूमा भिजिट नेपालका बारेमा प्रचार गर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ । विद्यालयका शिक्षक, प्रिन्सिपलको प्रोफाइलमा मात्र पनि भिजिट नेपाल राख्नका लागि सरकारले विद्यालयलाई अनुरोध गरेमा पर्यटक आगमन बढ्न सक्छ ।’
त्यस्तै इसानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमजन थापा सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर विदेशी शिक्षासँगसम्बन्धित व्यक्तिसम्म भ्रमण वर्षको प्रचार गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘नेपाली शैक्षिक संस्थाको कुनै न कुनै रूपमा विदेशी शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्ध हुन्छ । अहिले अन्तराष्ट्रिय रूपमा शिक्षकहरू आदानप्रदानदेखि लिएर भ्रमण पनि भइरहेका छ । त्यो क्षेत्रसम्म पुगेर आफ्नो ठाउँबाट केही न केही गर्न सकिन्छ । शैक्षिक संस्थाले पनि आफ्नो तर्फबाट विदेशमा प्रचार गर्न सक्छ । विदेशमा जाँदा भिजिट नेपालको प्रचार गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने ।
एन.प्याब्सन केन्द्रीय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा पनि शैक्षिक पर्यटन बढाउन शैक्षिक सेमिनार गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालयले भ्रमण वर्षलाई सफल पार्नको लागि शुरुमा विद्यालय क्षेत्रबाट गर्नसक्ने कार्यहरूको सूचि बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा दिवसको नारामा पनि भ्रमण वर्षलाई समेट्न सकिनेमा उनको मत छ ।
उनको सुझाव छ, ‘अझ ढिला भइसकेको छैन । यो शुरुवाती महिना हो । यो वर्षभरि शिक्षासँग पर्यटन जोडेर गर्न सकिने कामहरू के के हुन् सक्छ भनेर सरकारले छलफल गर्नुपर्छ । पर्यटनका कुराहरू पाठ्यक्रममा आइरहेका छन् । तर भ्रमण वर्षको विशेषता के? अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष पर्यटनको क्षेत्रमा शिक्षालाई जोडेर के विशेष कार्यक्रम ल्याउने भनेर एक ठाउँमा बसेर सोचेर संयुक्त कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’
विद्यार्थीलाई कसरी सहभागी गराउने ?
भ्रमण वर्ष सफल बनाउन विद्यार्थीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । कक्षा र उमेर अनुसारका विद्यार्थीलाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा भ्रमण वर्षको महत्व, अर्थ र यसमा उनीहरूले निर्वाह गर्न सक्ने जिम्मेवारीको बारेमा प्रत्येक शिक्षकले उनीहरूलाई सम्झाउन सकेको खण्डमा उनीहरूले ती कुराहरूको पालना गर्न सक्छन् । घरमा अभिभावकलाई बुझाउन सक्छन् भने उनीहरूले सक्ने काममा उनीहरूलाई सहभागी गराउँदा उनीहरू खुशी खुशी ती काम गर्न उत्साहित पनि हुन्छन् । दुई दशकपछि सरकारले आयोजना गरिरहेको भ्रमण वर्षलाई भोलिका दिनमा किताबमा पढ्नुभन्दा यो कार्यक्रममा उनीहरूलाई सहभागी गराउँदा उनीहरूले अनुभव संगाल्ने अवसर पाउने निश्चित नै छ । विद्यार्थीहरूको विशेषता भनेकै विद्यालय र शिक्षकले भनेका कुरालाई आत्मसात गर्ने हो । उनीहरूको यही विशेषतालाई बुझेर उनीहरूलाई भ्रमण वर्षमा प्रयोग गर्न सरकार छुटाउन नहुने शिक्षाकर्मीहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा रहेको भ्रमण वर्षलाई सफल गराउन हामीले विद्यार्थीलाई यसमा सहभागी गराउन पर्छ ।
साना बालबालिकाको हकमा नेपालमा पर्यटनका सम्भावना भएका ठाउँका बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ ।
भ्रमण गर्ने ठाउँहरूमा त्यही पोखरा, सौराहा र काठमाडौँबाट मुक्त बनाएर घुम्ने ठाउँ अन्त पनि छ है भन्ने कुरा पार्न बालबालिकाबाटै बुझाउनुपर्छ । पाठ्यक्रममा छैन भने पनि त्यसलाई समावेश गराएर पर्यटकीय क्षेत्रका दृश्य, भिडियोहरू देखाउन सकिन्छ ।
अभिभावकसम्म पुग्ने बाटो भनेकै बालबालिका भएकाले साना विद्यार्थीलाई हामी विभिन्न ठाउँका बारेमा जानकारी दिएर आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । बालकले यो वर्ष भ्रमण वर्ष हो, एक पटक त घुम्न जानुपर्छ है मात्र भनेपनि यसले अभिभावकलाई घुम्न प्रेरित गर्छ ।
ठूला बच्चाको सन्दर्भमा भने कक्षा ९ देखि माथिका विद्यार्थीलाई पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटक स्वय्मसेवक बनाउन सकिन्छ । पर्यटकहरू धेरै आवातजावत आउने ठाउँमा पर्यटक स्वयमसेवक ठाउँठाउँमा राखेर पर्यटकलाई सहज बनाइदिन विद्यार्थीलाई संलग्न गराउन सकिन्छ । विभिन्न विद्यालयका निश्चित विद्यार्थीलाई निश्चित समयका लागि पर्यटक स्वय्मसेवक राख्न सकिन्छ । यसबाट बालबालिकाले पनि नयाँ कुरा सिक्छन् । पर्यटक स्वय्मसेवक विदेशमा छ, नेपालमा पनि राख्न सके उपयुक्त हुन्छ ।
पर्यटकलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई गर्ने स्वागत र सम्मानका विषयमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिनुपर्छ । पर्यटकलाई नमस्कार गर्ने, आफूले गर्न सक्ने आवश्यक सहयोग गरिदिन उनीहरूलाई सुझाउन सकिन्छ ।
ड्ड विद्यार्थीलाई विद्यालयबाटै जथाभावी फोहर गर्नुहुन्न भन्ने जनचेतना जगाउन सकेमात्र पनि सो विद्यार्थीले जथाभावी फोहर फ्याक्दैन र आफ्ना परिवारलाई पनि फोहर फ्याक्न दिँदैन ।
त्यस्तै कुनै निश्चित दिनमा विद्यार्थीलाई विभिन्न धार्मिक स्थल, पर्यटकीय स्थल या विद्यालय वरिपरि सरसफाई गराउन सकिन्छ ।
विदेशमा रहेका आफन्ती वा विदेशी साथीहरूलाई नेपाल घुम्न आउन विद्यार्थीले निम्ता गर्न सक्छन् ।
विद्यार्थी स्वयमलाई यो राष्ट्रिय अवसरमा के गर्न सकिन्छ भनी सामूहिक छलफल गर्न दिएको खण्डमा उनीहरूले आफूहरूले गर्न सक्ने अनेकानेक उपायहरू सुझाउन सक्नेछन् जुन शिक्षक र अभिभावकको रोहवरमा व्यवहारमा सम्भव बनाउन सकिने छन् ।
कौस्तुभलाई प्याब्सन कप फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि